Iyo petroleum yekuchenesa inoreva chirimwa chinogadzira dhiziri, peturu, parafini, mafuta ekuzora, petroleum coke, asphalt, uye ethylene kubva kuzvinhu zvakaita sedhiringi, catalysis, kutsemuka, kutsemuka, uye hydrorefining yemafuta asina kubviswa anotorwa kubva mukuumbwa.
Mavharuvhu anogadzirwa neNewSWAY anokwanisa kusangana zvakakwana nemavharuvhu anodikanwa nemuchina wekudzivirira moto, kuputika uye zvimwe zvinhu zvine njodzi uye nekuona kushanda kwakachengeteka kwemidziyo.
Mumakamuri ekuchenesa, anowanzo shandiswa mayuniti uye anoenderana vharuvhu sarudzo dzakagadzirwa neNewSWAY vheji
Catalytic zvishandiso: plug mavharuvhu, imwe-nzira damping mavharuvhu, yakanyanya tembiricha shavishavi mavharuvhu, pneumatic shavishavi mavharuvhu, yakakwirira tembiricha gedhi mavharuvhu, kunyanya yakakwirira tembiricha vanopfeka nemishonga mavharuvhu.
Kugadzirwa kweHydrogen, hydrogenation, yekuvandudza unit: orbit bhora vharuvhu, yekudzora vharafu, Y-mhando gloves vharafu, hydraulic shavishavi vharuvhu, yakakwira yekumanikidza vharuvhu, kumanikidza kunowanzo kuve kwakakwirira kupfuura 1500LB.
Coking mudziyo: maviri-nzira bhora vharuvhu, ina-nzira bhora vharuvhu, plug vharuvhu, kazhinji zvichibva pakakwirira tembiricha mavharuvhu, iyo nyaya inonyanya chrome-molybdenum simbi. Yakakwira yakamanikidza yakaoma chisimbiso bhora mavharuvhu, kazhinji kubva 1500 LB kusvika 2500 LB.
Atmospheric uye vacuum distillation unit: yemagetsi gedhi vharafu, yakagadzirwa ne chrome molybdenum uye isina simbi simbi
Sarufa mudziyo: main kuputira bhachi vharuvhu, rakapfeka bhegi vharuvhu, bhachi vharuvhu vharuvhu, bhachi chivhariso vharuvhu, bhachi butterfly vharuvhu.
S-zorb chishandiso: Simbi yakaoma chisimbiso bhora vharafu, inodiwa kupfeka uye yakanyanya tembiricha.
Polypropylene chikwata: Stainless simbi pneumatic bhora vharafu
Hapana chaicho chigadzirwa. kunyanya kugadzirisa vharafu: pneumatic butterfly vharafu, pneumatic bhora vharafu, pneumatic chidimbu bhora vharafu, globe control mavhavha uye zvichingodaro.